Malasida 22.09.2021 22.09.2021
Amaqoqo e-Crockpot Chocolate
Indlela ukubiza ghost? esisebenzayo
Kungani amabhandlela esonto?
Ikhandlela le-Easter #yomequedoencasa
Akhunjulwe amaxhoba abethwe ngumbane ecaweni eTsomo
Ngokunquma kahle amaphupho, ungathola izeluleko ezinhle nezincomo, futhi ungafunda ulwazi oluningi oluthakazelisayo ngekusasa. Ukuze wenze lokhu, kudingeka uhlaziye ngokucophelela leli phupho, ucabange yonke imininingwane, bese usebenzisa ngokunenzuzo ukuhumusha okuhlongozwayo.
Kungani amabhandlela esonto? Enye yezincwadi zephupho ithi iphupho elinjalo liyisibonakaliso sezenzakalo ezibuhlungu nezingajabulisayo ezinomthelela okwamanje nekusasa. Umbono ebusuku, lapho ikhandlela livutha ngelangabi, kubonisa ukuthi maduzane uzohlangana nabangane abadala. Kungabuye kuhunyushwe njengokuthuthukisa ubudlelwane nabantu abaseduze futhi njengengxenye yokujabula.
Ukuze ubone amakhandlela esonto ephusheni eliphuma emoyeni, khona-ke ngokushesha umuntu ongemva kwakho uzoqeda inhlebo. Uma ukhanyisa ikhandlela ngokwakho - lokhu kuyisibindi sokudabuka. Umbono ebusuku, lapho ubona ukushisa amakhandlela aphelele, uphawu oluhle oluthembisa ukuphumelela ebhizinisini kanye nesimo sezimali esizinzile. Ukuphupha ikhandlela lesonto elikhanyayo lisho ukuthi esikhathini esizayo uzolahlekelwa ithuba elihle lokuqaphela noma udumazeka kakhulu.
Uma uthwala ikhandlela lesonto nawe - kuyinto ephathekayo yokuchitha imfucuza eyinkimbinkimbi nezinkinga othandweni lobuhlobo. Ukukhanyisa amakhandlela esonto ngephupho, kusho, maduzane uzohlangana nabangane abadala. Enye iphupho elinjalo libikezela injabulo yokuhlangana nomuntu othandekayo. Umbono ebusuku lapho ubona ukuthi amakhandlela akwenziwa kanjani uphawu lokuthi umsebenzi wakho onzima uzothathwa ngokushesha.
Uma kwakudingeka uthenge amakhandlela esonto ephusheni - lokhu kuyinkimbinkimbi yezinkinga nezinkinga ezincane. Ukubona inqwaba yamakhandlela avuthayo kusho ukuthi maduze kuzofika "ibhande elimhlophe" empilweni. Similar posts.
Ekukhuleni , Encwadini iphupho ukutolika Kungani baphupha ikhandlela? Ngokusho ezihlukahlukene iphupho izincwadi, ezimweni eziningi liyisibonakaliso ezinhle. Esikhathini esizayo esiseduze ke kubonisani ukugwema nenkinga yokuphuma nesimo esinzima, kanye nokuxazulula izinkinga.
Ngokwesibonelo, ikhandlela ukusha iphupho - uphawu kabusha. Uma yena umi othini, linda ukuvakashela abangane abahle, noma abangane. Maduze yehlela ekhaya lakho ezongivakashela, kuyilapho kuyoletha injabulo. Futhi nakhu kwekhandlela othini, okungukuthi etafuleni noma esitulweni uxwayisa izinkinga kungenzeka.
Umuntu Kulezo zimo, kumelwe siqikelele ukuba bangalisebenzisi kabi utshwala, ukuze ubuke ukusho izwi. Ikakhulukazi kumayelana edilini okuseduze, iholide noma party yenkampani. Ukuze ubone ikhandlela, okuyinto kalufifi kakhulu likhanyisa Egumbini elimnyama - kuya kwakuwukubonana kuhlulekile.
Lapho ikhandlela wax ngiphuphe owesifazane, yena kufanele uzilungiselele yokuthi ukuphila kwakhe siqu kuyothuthuka. Mhlawumbe esikhathini esizayo esiseduze, uyothola isicelo somshado. Uma lona wesifazane eshade, kuba isithombe ngesikhathi esokulala ebusuku, uyethembisa uhambo okuhle noma uhambo inzuzo.
Ikhandlela esandleni yomuntu ukuhlangana nabangane bakudala. Lo mcimbi uzoba ushiye umzila enhle futhi zikhumbuleke for a lifetime. Uma eziningi amakhandlela Uma ngabe wazi ukuthi uyaphupha amakhandlela, uyokwazi ukuqonda lokho ebona isithombe bese uthatha izinyathelo zokuphepha ezifanele. Ngokwesibonelo, kufanele sinake izinto zikagesi kanye wiring endlini ukuthi ozibone ephusheni ayahlakazeka emhlabeni amakhandlela efulethini.
Abakwazi ukukuxwayisa umlilo ekhaya, lokhu kungabangela short circuit noma evamile. Kodwa uma amakhandlela basuke ovuthayo, alungele injabulo engachazeki. Idina othandekayo endaweni enjalo - for the wedding kanye nokuthuthukiswa evumayo of ubudlelwano. Uma iphupho wabona umuntu oyedwa elindela bakhe obuseduze adventure inoveli.
Hamba ngomgwaqo, lapho esikhundleni izibani ovuthayo amakhandlela - siwuphawu lothando. Bheka iphupho nge izinto wax ebusuku kusukela ngoLwesibili kuya ngoLwesithathu kusho ukuthi umndeni ngokushesha kuyoba nokuthula. Kukhona ukungqubuzana phakathi izihlobo siyingcuba futhi ukhohliwe. Uma wenza lokhu ukuze zikhanyiswe, le microclimate ekhaya kuxhomeke ngokuphelele kuwe, futhi isinyathelo sokuqala kuyodingeka wenze ngokwakho.
Iphupho ngoLwesihlanu wawusho ukuxazulula amakhandlela inkinga. Lala e ngeSonto ebusuku uthi kweminyaka ujabule ubudala ngoMsombuluko - ukusiza othandekayo ekuqedweni enkingeni.
Uma abushelelezi onokuthula, maduze awe isenzakalo esijabulisayo oyoletha nabangane bakudala. Luphinde ukuvuselela ubudlelwane futhi uthole injabulo yabo yangaphambili. Umhlangano kuzovula nombono omusha futhi ukunikeza ithuba lokwenza nengangibajwayele ezithakazelisayo. Leliphupho lingahunyushwa ngalezi zindlela wokwakha ubudlelwano bakho nabantu obathandayo.
Umuntu ulindele ukuqonda futhi nokuvumelana emkhayeni. Kodwa kalufifi elivuthayo noma omunye ukuthi cishe sesibolile - uphawu ukukhungatheka eqinile futhi abawayeka.
Carry esandleni sakho ikhandlela isonto - ekulahlekelweni imali noma kothandekayo. Ukuze baphupha amakhandlela, luqede okusalungiswa - ukuzidonsela amanzi ngomsele. Cishe, ngeke ubahlebe. Othile ngemuva bangakha izingobe, ngokungafanele ugagule wena. Uma ikhandlela ethempelini wena bashaya ngokwakho, ulinde usizi nokudabuka. Kunalokho, izimfanelo isonto, simi phezu kwe-altare futhi yashiswa yaba umlotha izisekelo layo - harbingers impumelelo enkulu nokubonwa.
Ekhanda ungawela phansi noma ingcebo ezingalindelekile odumo okukhulu. Beka ikhandlela impilo futhi Phumula Ngokuvamile umuntu unalo iphupho: esontweni, amakhandlela altare Yini isithombe esinjalo? Cishe, lesi ibhekisela yokuthi ingalali kuyadingeka ukuba banake imvelo, ubudlelwano nabantu osondelene nabo bomdabu. Lokufaneleka ethile yilezo amaphupho lapho ubeka ikhandlela sokwahlulela abafileyo noma impilo.
Esimweni sokuqala liyisibonakaliso ukuthi wesabela impilo kothandekayo, uzama ukuvimbela inhlekelele eseduze isuke. Uma ikhandlela isethelwe impilo, kusho ukuthi umngani wakho uyakwazi banisize zakho, ngisho nakuzo isimo esinzima kakhulu. Othile obathembayo futhi uqiniseka ngeke akuvumele hhayi ukuthi wena phansi.
Futhi leli phupho uphinde wakuqinisekisa. Kodwa ukubeka ikhandlela ephusheni ezandleni umuntu oshonile - ekuhlaleni ngokwehlukana noma usizi.
Bheka ibandla ukuhambisa eziningi abantu abathwele elikhanyayo wax izinto - Isiboniso okungekuhle. Nquma badinga ukuba ngokushesha, sithembele kuphela ngamandla abo. Kodwa ukushiswa isonto ikhandlela phezu kwe-altare, ukuze ngalo kancane basondele, kubonisa ukuthi achithe ngokwanele isikhathi ukholo. Okhela ucime amakhandlela Leliphupho ine incazelo efanayo, kungakhathaliseki indawo lapho isenzo senzeka khona: ekhaya, ebandleni noma emgwaqeni. Kusukela zokuxhumana uthola injabulo yangempela futhi bakujabulele.
Amakhandlela etafuleni ukuthi ukukhanyisa ilindele yokuchitha isizungu romantic, abonisa ukuqina yakho ngokweqile nemlingani wakho. Kufanele bazokhululwa, futhi ngeke ukuvula facets entsha ukuthandana.
Kanyekanye ucime amakhandlela ephusheni - uphawu izenzakalo ezimbi. Mhlawumbe bazokwazi ngiphule ukuziqhenya zokungazimiseli ukuyekethisa. Liphinde lixwayise ngokuthi esikhathini esizayo esiseduze akudingekile ukwakha izinhlelo ezintsha, njengoba Unethuba oluncane kakhulu impumelelo. Buka ikhandlela ukwenza inqubo - ukuze kuzuze ukuthi kungenziwa sibonga drive wayo nangokuzimisela etholwe. Ukusebenza kanzima uyonika elamukelekile futhi kuyokuzuzisa nomphakathi.
Lokho kusho i ngisho ilangabi, esikwaziyo kakade. Liluphawu emihlangano nabangani abahle, wenze ujwayelene nabantu ezintsha futhi ubungane obuqinile. Kodwa kuthiwani uma inhlansi, ogama umlilo siyafiliza?
Ngokwencwadi ethi iphupho, kungcono kuwuphawu olubi. Lokhu ikhandlela ubikezela ukudabuka noma ukulahlekelwa. Lalelisisa futhi ungaqaphile, ungabulawa ukusongela ukulimala noma ukugula. Kuyefana nasendleleni amalungu omndeni. Kusukela kubo iza usongo esicashile, ngakho udinga zinakekele.
I mncane noma kakhulu ethuthumela flame - ukuze ekugcineni ukudabuka nomakhwapheni. Isizathu - kuwe. Cishe, ukucasuka yakho futhi nokuntula isineke uvinjelwe ukusungula microclimate lobu buhlobo. Kufanele sifunde ukuqonda umlingani - kuphela kulesi simo, isixhumanisi uzohlala. Uma ikhandlela burns ephusheni ngendlela ephambene neyemvelo elikhanyayo, alindele emcimbini enomsindo noma izimemo lomshado. Kodwa musa ukusheshe ulichaze: ukuzikhumbuza yonke imininingwane, ngoba ngamunye wabo Ungashintsha ukuhumusha impande.
Uma ikhandlela uyaphuma ngokwalo ngaphandle kwesizathu, sinake indlela yakho yokuphila. Mhlawumbe yakho lazy walinganisa, ukuntuleka isifiso sokuvelela nangokuzimisela, ukuntula ulwazi nokuthola yokungabi nesikhathi esanele uvinjelwe ukuya phezulu isitebhisi umsebenzi.
Believe me, uma nalezi zici, uzothola impumelelo yangempela. Futhi, umbono onjalo kungaba uphawu amathuba elahlekile futhi amathuba aphuthelwe. Shiya i-value ehlukile has a iphupho: amakhandlela kuvuthe futhi kungazelelwe luqede i isivunguvungu esikhulu somoya. Uma welula amalangabi bebodwa - usizi. Uma ikhandlela ashaye phandle umuntu emi eduze Umphikisi empilweni yangempela kungaba ehhashini, kodwa kufanele amnike ubuqhawe ebuhlotsheni nabanye abantu noma emsebenzini.
Owesifazane acime ikhandlela ubikezela elivela kuzo amakhaza elala ozithandayo. Umuntu - ukuntuleka ukuhlakanipha nesu ezingase silondoloze uthando nokuqonda emkhayeni. Ukwenza noma ukuthenga amakhandlela Uma ephusheni lakho ufakaza ukudalwa amakhandlela studio, linda ukuqaliswa siqu. Kulesi umsebenzi ngeke igcine ngokuzuzisa wena kuphela kodwa futhi abantu abaseduze kwabo. Ungase wenze ngisho isenzo noma isenzo zigcwele umhlaba wonke. Okungenani, iphupho kubonisa ukuthi une wonke amathuba ukuze ngibe usaziwayo.
Uma oda ukukhiqizwa amakhandlela, silungiselele twist okukhulu ukudalelwa. Uzokwazi ukuba ngokuphelele ukushintsha izenzakalo ekuphileni kothandekayo, ukudlala indima ebalulekile yokuthi ngokoqobo ukumsindisa - ngokwenyama noma ngokomoya. Thenga amakhandlela ephusheni - uphawu injabulo futhi kumnandi. Uzothola iholide elikhulu eliphithizelayo, okuyinto ethatha kumnandi.
Abantu abadala kungenzeka wawusho lomshado indodana noma indodakazi, abasebancane - iphathi enkulu. Bona phakathi esokulala ebusuku nje wathenga amakhandlela sha - ukushintsha.
Kodwa ukudayiswa amakhandlela - uphawu ukulahlekelwa kungenzeka. Noma wena uyawachitha isiphetho ithuba. Uma ikhandlela kuyinto ukuma engavamile kakhulu, eyenziwe ngendlela izinto nezilwane, ezimazombe kanye banana, likhuluma ngokuphela amakhono imilingo. Umuntu onjalo uthambekele sciences okulumba, ngakho-ke kubalulekile ukuthuthukisa ithalente yabo.
Njengoba izinkolelo zasendulo zisho, ngobusuku bukaJanuwari 7, umgqa ongabonakali phakathi kwezwe eliyimfihlakalo kanye nezwe langempela liba mncane, ngakho-ke ukubikezela kube okulungile futhi okuyiqiniso ngangokunokwenzeka. Ukuhlukaniswa nguKhisimusi ku-saucer kwenza kube lula ukudalula izimfihlo zesikhathi esizayo, ukufunda ngamathemba omshado wesikhathi esizayo, ukuvula ukugcwaliseka kwezifiso.
Ukulungiselela ukunethezeka kukaKhisimusi kwi-saucer: Hlanganisa izinwele, susa izindandatho, ubucwebe obulenga entanyeni, namacici; gcina ikamelo lingathuli; ukubeka ngokucacile futhi ngokucacile umbuzo; thatha umkhosi ngokujulile.
Ukuhlukaniswa ngezinhlamvu ezintathu Yenza umkhuba okunconywe enkampanini yabangane abashadile. Faka phezu kwetafula izinhlamvu ezintathu ezifanayo, uthele kuwo usawoti, ushukela kanye nofulawa. Gcoba ama-saucers ngamapapkins wephepha, suka etafuleni.
Ngalesi sikhathi, abangani kufanele "bagweme" amasoso.
Jikela futhi ukhethe noma iyiphi isidlo ngaphandle kokukhipha amaphuphu. Uma kwakukhona ufulawa ku-saucer, umndeni uyoba nokuchuma unyaka wonke, ushukela - ngaphambi kokuphila "okumnandi" nenjabulo yothando lweqiniso, usawoti - izinyembezi nezinkinga. Ushokoledi wamanki noma ushokoledi omnandi waseJalimane, amagxolo omhlophe ama-almond noma ama-melt, ne-chocolate yamasethi ihlangene ukwenza iphunga elimnandi nelomnandi le-chocolate. Faka esikhundleni ushokoledi ubisi nge-candy ekhanyayo ekhanyayo noma ushokoledi okhanyayo ofanayo uma ungathanda.
I-iresiphi yenza cishe ama-candi ayishumi nambili, futhi ingafakwa phezulu noma phansi kalula kalula. Sebenzisa ama-peanuts angama-half unsalted no-half salted for flavor sweet and salty. Bona ukuhluka kwemibono eminingi. Ukuze ubheke ngokukhethekile okwenziwe isipho, gcoba inhlanganisela ye-peanut cluster encibilikisiwe ibe yi-mini foil cupcake liners noma amakhekhe we-candy ekhethekile.
Phakamisa kubo ebhokisini eliyindilinga noma isitsha esingajulile esihlotshiswe ngomnsalo.
Engeza amantongomane. Vala bese upheka phezulu imizuzu engu Vula isimo sokubhaka embizeni bese ugoqa njalo imizuzu engu cishe amahora angu-1 kuya kwangu-2 ubude noma kuze kube yilapho yonke i-tshokolethi ichitheka ngokuphelele. Hlanganisa ukuhlanganisa.
Donsa isipuni noma i- cookie encane kwiphepha le- wax bese uvumela ukuba lipholile kuze kubekwe cishe amahora angu-1 kuya kwangu-2 kuya ku Gcina amaqabunga ase-cooled aphelile futhi aqoqe ngokuphelele i-chocolate yamapulangwe endaweni epholile noma esiqandisini esitsheni esiboshwe ngokuqinile esihlukaniswe ngamashidi wephepha le-wax.
thoughts on “Ikhandlela elimhlophe”
Faukora on Ikhandlela elimhlophe